Boguslavskaya Zoya Borisovna, ogama biography kuchazwa kulesi sihloko, kuyinto wemidlalo odumile futhi umbhali. She - umbhali yemisebenzi eminingi kwamasiko kokubili ezweni lethu kanye nasemazweni aphesheya.
B. Zoe Ngazalelwa eMoscow ngo-1929. Umndeni wakhe kwaba zihlakaniphile. Ubaba Boris Lvovich kwakubhekwa njengesenzo usosayensi oluvelele emkhakheni isiqoqi sama-softwe. Ngo amanyuvesi amaningi, thina babeyifunda zincwadi ziphakathi kokulandisa okuvelele wakhe nezinzuzo ngokwesayensi.
Zoe, naphezu propensity ngesayensi, amkhethile izincwadi ekuphileni kwakhe. Futhi konke kwaqala nge nkundla wokuzilibazisa esikoleni, lapho akagcini nje kudlalwa, kodwa futhi umbhali nemidlalo kwenziwa. Ngiphakathi kusihlwa etemibhalo ayizange iphumelele ngaphandle Zoi Boguslavskoy.
Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, yangena GITIS ku teatrovedchesky uMnyango, okuyinto kuqede ukuzilolonga udumisa.
UNkulunkulu wabe esedlulisela ukuphila kwakhe kwaba esikoleni iziqu e-Institute of Art Umlando ngesikhathi Academy of Sciences of USSR. Boguslavskaya Zoya Borisovna, biography ezokwenza nentshisekelo iyiphi tetemibhalo, walivikela ngempumelelo ocwaningeni wakhe. Wenza umsebenzi njengoba umhleli ngesikhathi sokushicilela indlu "umbhali namaSoviet", futhi ngaphezu kwalokho, kwaba womfundisi ngaleso Higher Theatre School eMoscow. Kamuva lapho walibangisa uMnyango ezincwadi Committee on Lenin noMbuso Imiklomelo.
Ukuqala umsebenzi yetemibhalo
Zoe Boguslavskaia waqala umsebenzi wakhe njengoba umhlaziyi ifilimu. Ngo-1960, waba nezihloko edumile cinema kanye yaseshashalazini. Wabhala wokulandisa mayelana izibalo esivelele isiko Vera Panova futhi leonid Leonov.
Ngo-1967, yena seziqalile ukusetshenziswa wakhe etemibhalo. Zoe Boguslavskaia kabani biography yabakhanga abalandeli bakhe, kwaba umbhali kule noveli "Kusasa." It yanyatheliswa ephephabhukwini "Banner", futhi ngokushesha elihunyushwe olimini lwesiFulentshi.
Kusukela ekuqaleni kwawo-1970 Zoe Boguslavskaia mikhondo eziningi,. Namaprozi imisebenzi yakhe zingatholakala ephephabhukwini "INguqulo Yezwe Elisha", "Youth", "Standard" nezinye zizincishe injabulo izincwadi ezintsha.
isiqondiso Creative nezinye izincwadi
Izethameli baziswa izincwadi ezinjalo iningi umbhali, njengoba "Eziyisikhombisa engamakhulu entsha", "Vala" "Obsession", "Ukuvikelwa".
Ngaleso sikhathi, a baxgeki zazihlukaniswe nezimpi ezimbili. Othile bacula umbhali ithalente, othile wamemeza ngezwi elikhulu apolitical futhi ngokweqile ukumba ekujuleni ngokwengqondo ukuthi umphefumulo womuntu.
Ngo amazwi omlobi, imisebenzi yakhe bebelokhu ligxile umkhiqizo izingqondo zabafundi bencwadi izwe lokukhanya nobuhle. Uyabhala ngabantu, egcwele nethemba. Yebo, ngezinye izikhathi zingabantu nasezimweni ezinzima, kodwa ngaphansi kwezimo qinani ukuzihlonipha kanye nethemba lokuhle efanele. Bathatha ukuphila njengoba kunjalo, futhi ungabeki phetho.
Zoe Boguslavskaia akazange isici imisebenzi yakhe ukungabakhathaleli nhlobo izinhlamvu ezimbi. Wayengalithandi ezimpini zabo ezingokomzwelo. Uma kukhona ayesebenzelana uhlamvu okubi, khona-ke ekugcineni kuzoba nje indoda udidekile ofanelekelwe uzwela, hhayi usulu.
Zoe Boguslavskaia, ogama biography kuhlanganisa imihlangano nabantu abaningi abanamakhono kwekhulu lamashumi amabili, wabhala okuningi ngabangane bakhe kanye namaqabane. Kwaba indaba yakhe edumile ethi "noLisa Baryshnikov, Misha futhi Minnelli" "Isikhathi Lyubimov futhi Vysotsky". Ukuthandwa futhi wathola iqoqo Tindzaba "izindaba unfabled", equkethe izinkumbulo imihlangano nabantu abavelele (wabhekisela Mark Shagal, Brizhit Bardo, uVladimir Vysotsky, Arkady Raikin, nabanye abaningi).
umbhali Special ukwamukelwa thola eMelika. Ngaphezu okungenhla, Zoya B. waba umbhali wencwadi ethi "American" abhalwe isitayela kwezobuciko futhi lesibonwa. E-US, lo msebenzi lithole izindondo eziningi etemibhalo yathathwa.
Zoya B. wabhala eziningi, futhi enkundleni yemidlalo. Omunye indaba mpendulwano ( "Imininingwane") ukuthi okuhleliwe ku Theatre. Vakhtangov. Enye ukubuyekeza YaseMoscow Art Theatre, kodwa ke abazange ukudlala ngenxa yezinkinga ukucwaninga.
Izithelo eyinhloko lokusungula Boguslawska ziye zahunyushelwa ezilimini eziningi, kuhlanganise isiJapane, isiFulentshi, isiNtaliyane, awuwedwa ngesiNgisi.
incwadi yemiqulu emibili enesihloko esithi "Ngosizo lwesikhulu esithile Looking Glass" yakhishwa ngo-1998, lapho eqoqwe yonke imisebenzi umlobi.
Boguslavskaya Zoya Borisovna ku 60s eSoviet Union wadala Association of Women Abalobi, bese baba inhloko yenhlangano efanayo international esekelwe e-Paris.
Nanguya ilungu PEN Club Russia kanye eyilungu ibhodi isihloko omagazini abaningi etemibhalo.
Independent Award "Triumph" yasungulwa ngo-1991 ne nokufakwa Boguslawska kuleli zwe, okuyinto emahlangothini zonke ubuciko. Futhi, lesi sikhwama sidalwe ngaphansi igama elifanayo, eklanyelwe ukusiza abaculi.
Ngo-2010, ngokokuqala ngqa umklomelo intsha "Triumph" futhi umklomelo impumelelo olungokwesayensi emikhakheni ehlukene kolwazi.
"Triumph" luye lwaba iphrojekthi enkulu mashumi eminyaka ambalwa okugcina Boguslawska. Ngakho-ke, yonke imikhosi, Fairs, amakhonsathi, wayeqhuba ngandlela-thile walandisa premium futhi isiKhwama.
Yena okuqalwe izincwadi ezinyatheliswa "Eksmo" "Golden Collection" Triumph ", ehlanganisa Oleg Tabakov, Andrei Voznesensky, Davydov nabanye abaningi.
Zoe Boguslavskaia washada kathathu. Umyeni wakhe wokuqala kwaba George Novitsky. Wayengumuntu kumdlali we-Leningrad Theatre. Uthando lokuqala vertiginous Zoe kwaba Eminyakeni eyishumi nesishiyagalolunye ubudala. Mhlawumbe yingakho umshado isihlakazeka ngokushesha.
umyeni Okwesibili kwaba Boris Kagan, isazi. Yena wayengumbulali udokotela wesayensi lobuchwepheshe, futhi wathola ngesikhathi sakhe Stalin Prize. Lo mbhangqwana wabeletha indodana, leonid.
Ngokushesha Zoya B. bajwayelane Andrei Voznesensky, ngubani ngokoqobo kuye kwavela ikhanda lakhe. Wavuma wakhe siqu, ithonya Voznesensky sika sasisikhulu kangangokuba yena akazange anqikaze, wamshiya umyeni wakhe.
Ngo-1964, Zoe Boguslavskaia, izithombe ezingakabelwa zishicilelwe kunoma iyiphi iphephabhuku, ashade okwesithathu. Lokhu mshado zinyanga ngoba nayo, uyakuyilobola eyathatha iminyaka engu-46 isikhathi eside futhi bejabule futhi yaphela ngenxa ukushonelwa umngane womshado ngo-2010.
Ukuze kuhlonishwe Voznesenskogo Zoya Borisovna wasungula umklomelo "Parabola".
Boguslavskaia okhuluma isiNgisi, isiFulentshi nesiJalimane.
Indodana yakhe, leonid - zimali eyaziwa futhi co-umnikazi esitolo inthanethi Ozon.ru futhi inkampani "Yandex". Ngo-2014, wahlanganyela uhlu "Forbes" omunye osomabhizinisi acebile.
"Indlela Steel Ingabe Omnene": isifinyezo. "Njengoba steel omnene" Ostrowski
Hippolyte Kuragin: isithombe kanye ubuntu izici
EYekaterinburg Eminyuziyamu: sizoyaphi yini ukubona
Indlela yokuthuthukisa wamathumbu ukunyakaza? Amalungiselelo kanye nemikhiqizo ngcono peristalsis emathunjini
Izindlela Ukufundisa isiZulu